Quarantine နှစ်သိန်းတစ်သောင်းကို စစ်ဆေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောဆို ရုပ်သံ “စက်တော့ရှိတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေက တော်တော်လေး လက်ပန်းကျသလောက်ကို ဖြစ်နေပါပြီ” ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ထားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု အရေးပေါ် စီမံချက် အကောင်အထည် ဖော်ရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(IDA)ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၅၀)ချေးငွေရယူ ရေးနှင့် စပ်လျန်း၍ […]
ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော် အဂတိလိုက်စားမှု သုံးခု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ချမှတ်ခံရ အဂတိလိုက်စားမှု လေးမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရတဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အမှု သုံးခု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ကျခံရန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားရုံးက […]
ဝါယာရှော့စ်ကြောင့် ဖြစ်သော မီးဘေး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချိန်သုံးမိနစ်ဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ရှုပေးကြပါ
ဝါယာရှော့စ်ကြောင့် ဖြစ်သော မီးဘေး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချိန်သုံးမိနစ်ဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ရှုပေးကြပါ ဝါယာရှော့စ် မီးဘေး ကာကွယ်နည်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် မီးလောင်းခြင်းများလေ့လာကြည့်ရာ ဝါယာရှောစ် ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နေပါသည် ဘာကြောင့် ဝါယာရှောစ်ဖြစ်ရပါသလဲ ကျွန်တော် အတွေ့ကြုံနှင့်သိသလောက့်ရှင်းပြပါမည် တိုးတက့်လာသော လူနေမှု့အဆင်တန်း များ ၏ အဓိကသော့ချက့်တစ်ခုဖြစ်သော အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ […]
ပြိုင်ပွဲဝင်သည့် Mask တွင် အတိုင်ပင်ခံဓာတ်ပုံ အသုံးပြု၍ ဆုရရှိကြောင်း ဝေဖန်သူများကို ဂရုစိုက်ရန်မရှိဟု တတိယဆုရရှိသူပြောဆို
ပြိုင်ပွဲဝင်သည့် Mask တွင် အတိုင်ပင်ခံဓာတ်ပုံ အသုံးပြု၍ ဆုရရှိကြောင်း ဝေဖန်သူများကို ဂရုစိုက်ရန်မရှိဟု တတိယဆုရရှိသူပြောဆို “အမေစုပုံပါလို့မို့ပြောတာဆိုတာပေါ်မှာတော့ သိပ်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပြောပြောမပြောပြော အစ်မအနေနဲ့ သိပ်တော့ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ Mask ပုံနဲ့ အမေစုပုံပါလို့ Like အများဆုံးပေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” မဝေေ၀နှင်း (Mask ပြိုင်ပွဲတတိယဆုရရှိသူ) နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် […]
ဘာကြောင့် မူလတန်းအဆင့် ကလေးငယ်များဖြင့် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့စဉ်းစားရသလဲဆိုတာ ပညာညွှန်ချုပ် ဦးကိုလေးဦးပြော
ဘာကြောင့် မူလတန်းအဆင့် ကလေးငယ်များဖြင့် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့စဉ်းစားရသလဲဆိုတာ ပညာညွှန်ချုပ် ဦးကိုလေးဦးပြော ဦးကိုလေးဦး (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန) အခြေခံပညာကျောင်းများ ဇူလိုင်လဦးပိုင်းမှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး ကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ပါက မူလတန်းအဆင့်မှ စတင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် မူလတန်းအဆင့်ကို စတင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဦးက […]
အဆိုတော်လင်းလင်းတို့ ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စ အသံဖိုင်အတွက် ရှေ့နေကြီးရောဘတ်စန်းအောင်နဲ့တွေ့ပီး ရှင်းလင်း Live
အဆိုတော်လင်းလင်းတစ်ယောက် ငွေသိန်းပေါင်းများစွာ လိမ်ညာယူထား ဆိုတဲ့ အသံဖိုင်ကိစ္စ လိုက်ဖ်လွှင့်ပီး ဒဲ့ရှင်း နိုင်ငံရေးဆယ်လီ ဂိုရှယ်လေးနဲ့ တစ်ဖက်မှ (အများအထင် ရှေ့နေရောဘတ်စန်းအောင်တို့) ပြောဆိုထားတဲ့အသံဖိုင် ဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ စွပ်စွဲခံရသူ အဆိုတော်လင်းလင်းမှ ရှေ့နေကြီးရောဘတ်စန်းအောင်ထံသို့ သွားေ ရာက်ရှင်းလင်း Liveလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အသံဖိုင်ကို တင်ခဲ့သူကတော့ […]
ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာရှင်များအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းလိုပါက ငွေမကုန်ပဲလွယ်ကူစွာ ပျောက်ကင်းသောနည်းလေး မဖတ်အားသေးရင် ရှယ်ထားလိုက်ပါ
ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာရှင်များအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းလိုပါကအင်မတန်လွယ်ကူစွာပျောက်ကင်းသောနည်းကိုညွှန်ပြပေးပါမည်။ ဆားနှစ်ပိသာကိုရေပူရေအေးမှာစပ်ပြီးထည့်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကိုယ်လုံရေမှာမြုတ်ရပါမည်မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာစိမ်ရပါမည်။ စိမ်နေစဉ်အသက်အောင့်ပြီးဝမ်းဗိုက်ကိုနောက်သို့ချပ်ထားပါမျက်ဝန်းကိုမှိတ်လျက်စိတ်ကိုမျက်ဝန်းမှာစူးစိုက်ပါရေသည်မပူလွန်းမအေးလွန်းဖြစ်ပါစေ…. မစိမ်မီဆားလက်တဆုတ်ကိုရေစိုယုံစွတ်ပြီးတကိုယ်လုံးကိုအနှံ့ပွတ်လိမ်းရပါမည်နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်တလအတွင်းရောဂါအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီလုံဝပျောက်ကင်းပါမည်။ ပျောက်ကင်းပြီးနောက်မှာလည်းရေပူရေအေးစပ်ပြီးအငန်ဓါတ်ရှိရုံသာဆားကိုခပ်ထားသောရေကိုချိုးရပါမည်ပျောက်ပြီးနောက်တပတ်တခါဆားနှစ်ပိသာနှင့်စိမ်ရပါမည်။ ဆားရေစိမ်သောအခါရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အချက်များရှိပါသည်ထိုသတိပေးချက်များကိုအထူးလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။ စိမ်သောအခါညနေစောင်းအချိန်ခြောက်နာရီ လောက်မှာစိမ်ပါကပိုသင့်မြတ်ပါသည်။ ဆောင်ရန် ဆားရေမစိမ်မီဆားပွတ်ပါရန် စိမ်နေစဉ်အတွင်းညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းအသက်အောင့်ကာဝမ်းကိုချပ်ထားပါအသက်ရှူလိုကရှူနိုင်ပါသည်ပြီးလျှင်ပြန်အောင့်ထားပေးပါ….. မျက်ဝန်းကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကိုထိုမျက်ဝန်းမှာစူးစိုက်ပါ….ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းပါသော်လည်းဆားရေ ကိုသာချိုးပြီးဆားပွတ်လိမ်းခြင်းကိုနေ့စဉ်ပြုပါ…. ရှောင်ရန် ဆားစိမ်ပြီးလေတိုက်သောနေရာတွင်လည်းကောင်း ပန်ကာ အဲယားကွန်းခန်းတွင်လည်းကောင်း ကးမှန်ဖွင့်မောင်းခြင်းကိုလည်ကောင်း…. ဆိုင်ကယ်စီးအပြင်ထွက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း မပြုလုပ်မိစေရန်အထူးသတိပြုရပါမည်။ဆားစမ်ထားသောခန္ဓာသည်အနွေးဓါတ်တို့ဖြင့် ကိုယ်အတွင်းမှာနုညံ့နေစဉ်နှလုံအိမ်မှာလည်းနုညံ့လျက်ရှိနေသည်။ ထိုစဉ်အခါမှာ အေးသောနေရာ အေးသောရေခဲရေ ရိုးရိုးရေစိမ်းသောက်ခြင်း […]
ဒေးဗစ်လားအတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းနည်းမိသလို ဂုဏ်လဲယူပါတယ်ဆိုတဲ့ L ဆိုင်းဇီ..
အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Lဆိုင်းဇီ က အမြဲပျော်ပျော်နေတက်သူဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာလဲ သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့အတူပျော်စရာလေးတွေကို သာဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ် ယနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဆရာအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ရိုးရှင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ” တော်ရုံတန်ရုံ ကျွန်မ စာရေးပြီး […]